Minyengetero yehukama ine masimba kune vakaroora | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Simba hukama hwekunamatira minamato
1 VAKORINDE 16:14 Bhaibheri Dzvene (BSN)
14 Zvinhu zvako zvese ngazviitwe nerudo.
Kuzvinyengeterera isu pachedu muukama kunogona kuve kwakanaka kutsigira kwemweya kwatinogona kupana. Muhukama hwese, vakaroorana vane chikwereti mumwe kune mumwe basa rekutarisira, uye isu tinofanirwa kudzidza kubatsirana kuburikidza neminamato. Zvakare, shamwari uye mhuri uye vakanaka vanokwanisa kutsigira vakaroora nekuvanamatira. Rwendo rwekusingaperi rwakareba zvekuti chero munhu angaita nemunhu wakashata; nokudaro isu tinofanira kuzvibatsira pachedu mumunamato. Munyaya ino tichave kutarisa minamato yehukama hune hukama kune vakaroora.
Kune yehukama hwese, Mwari anayo chinangwa nayo. Nekudaro, kana hukama huchikatadza kubereka michero yakanaka, chinangwa chaMwari pamusoro pacho chingangokanganiswa. Kana vaviri vakaroora vakagara nekusingaperi vachifara muukama, mubhedha wehukama hwakadaro hunofanira kuvakirwa pana Kristu Jesu. Mwari anofanira kunge ari musimboti wehukama hwese hunofanirwa kuvapo pakati pevakaroorana.
Mwari vane hanya nehukama hwese, sekungofanana nekuti Vanofarira hukama hwedu naye. Chinangwa chekuvapo kwedu pano ndechekuti tive nehukama hwakaenzana naMwari. Nekudaro, Mwari vane chinongedzo chikuru chehukama hwese.
Just chero munhu asati apinda muhukama, zvakakosha kutsvaga chiso cha Mwari kune hukama ihwohwo. Munhu haafanire kunge achigara murima kana paine Mwari anogona kuratidza mwenje uye atiudze chinangwa chezvinhu zvese. Kunyangwe mushure mekutsvaga kumeso kwaMwari uye iwe uine kubvumidzwa Kwake kuti upinde muhukama ihwohwo, zvichiri kukosha kugara uchinamatira kuti hukama hwacho huve nezvibereko zvakanaka.
Zvakare, sevabereki vane chikwereti kuvana vavo kana maawadhi basa remunamato, pese paunounzwa nemwanakomana kana mwanasikana wavo kumba, kubva pazuva iro, ivo vanofanirwa nemunamato wako sevabereki. Munamato wevabereki une simba rakasimba pahukama hwehupenyu hwevana vavo.
Izvo zvakakoshawo kuti uzive dzimwe dzenzvimbo dzekutarisisa pakunamatira hukama hwevaviri. Iko kutarisa kwehukama hwedu kunofanirwa kuve kwakatenderedza pane zvinotevera:
Undilated kuda Mwari uye mumwe nemumwe
Ishe Jesu, ndinonamata kuti mudzidzise mumwe wangu neni kuti tiregererane. Tipeiwo kune vaviri vedu inyasha dzekuregerera pachedu kana isu tichiyambuka rwedu.
Baba ishe, tidzidzisei maitiro ekuregerera vamwe. Ndinoziva nguva zhinji zvinogara zvichinetsa kukanganwira uye kukanganwa pafupifupi nekukurumidza. Asi ini ndinotenda nerubatsiro rwako, unogona kutidzidzisa nzira yekuzviregerera pachedu.
Tipeiwo rugare rwepfungwa kuti isu hatizotambudzwa nekurwadziwa kwezvakaitika kare muzita raJesu.
Ini ndinonamata kuti mudzidzise munzira dzenyu kubata nekunetsana pakati pedu, tidzidzisei kuregererana uye kufambira mberi nehupenyu. Batsirai kuti tivimbane isu kana tichiti tinokumbira ruregerero, tipeiwo nyasha dzekuregerera isu sekuregerera kwamakatiregerera zvivi zvedu zvese.
Munamato weHurumende / Kubatana
Baba kudenga, ndauya pamberi penyu nhasi kuti muchatidzidzisa munzira dzenyu kuti tibatane. Nekuti rugwaro rwunoti: Vaviri vangasangana pamwechete vasina kusangana here? Ishe, tidzidzisei kuti nguva dzose regai mweya weHarmony ugare pakati pedu muzita raJesu.
Ini ndinoparadza zvese dhiabhori rekuparadza hukama hwangu nekushaiwa kwekubatana muzita raJesu. Ini ndinonamata kuti mudzidzise maitiro ekuita zvinhu pamwe chete, tidzidzisei maitiro ekuita sarudzo pamwechete muzita raJesu.
Baba Tenzi, tibatsirei kuti tiite zvinhu muchiwirirana kuti Dhiabhori arege kuwana nzvimbo pakati pedu muzita raJesu.
Munamato wekutaurirana kwakakwana
Ishe Jesu, ndinonamata kuti mudzidzisei kutaura nerudo uye netsitsi, tiratidze nzira yekutaura nesu pachedu muzita raJesu..
Baba Tenzi, dzidzisai murume / mukadzi wangu neni kuti titaurirane sei nenguva yakanaka isinga zere kutsamwa. Tidzidzise isu kuzviranga pachedu nerudo muzita raJesu.
Munamato wekusada kusarudzika kuda Mwari uye nemumwe
Baba ishe, izwi renyu rinoti ngatide vavakidzani vedu sezvatinozvida isu. Tidzidzisei maitiro ekuzvida isu muzita raJesu.
Ishe Jesu, tinokumbira kuti mudzidzise mumwe wangu neni nzira yakakwana yekuratidza rudo rwedu muzita raJesu. Tipeiwo inyasha yekuda Mwari zvakanyanya nezita raJesu.
Baba Tenzi, ndinonamata kuti mudzidzise mukadzi kana murume wangu nemi kuti muve nemoyo murefu munguva yeKutambudzika. Batsirai kuti tivimbe zvakanyanya mamuri kuti kunyangwe kana tiri panguva yakaoma, ticharamba tichitenda kuti mune simba rekutiponesa.
Baba ishe, ndinonamata kuti mutipe mweya wekudzikama, kuti tigokwanisa kuzvibata nerudo muzita raJesu.
Ishe Jesu, ini ndoziva hukama hwacho hunogona kutishungurudza pane imwe nguva, asi ini ndinonamata kuti utipeiwo Nyasha dzekuregerera mumwe nezita raJesu.
Baba ishe, seni sezvamakashivirira zvese zvakawandisa, mumwongo mumwe chete, ndinonamata kuti mutidzidzise mwoyo murefu. Iwe unozotipa isu tsitsi dzekuzvishingirira pachedu kusvika kumagumo muzita raJesu.
Baba ishe, ini ndinoparadza simba rese riri kuronga kuumba kuvengana pakati pemumwe wangu neni, ndinopaza masimba avo muzita raJesu.
Ishe Mwari, ndinonamata kuti mari ibudirire kune mumwe wangu, pane zvese zvaanoita, ndinonamata kuti mumuropafadze muzita raJesu.
Baba vekudenga, ini ndinonamata nekuda kwenyasha dzinozotiisa pamwechete murudo kusvika kumagumo muzita raJesu.
Ini ndinotema kuti protection yako ichave pahupenyu hwemumwe wangu muzita raJesu. Chero zano remuvengi rekuita kuti ini ndichichema pamusoro pake rinopedzwa muzita raJesu.
Ishe tinotema chirevo kuti michero yedu ichave maropafadzo epasi. Isu tinoramba kubereka vagabonds muzita raJesu.
Rugwaro rwunoti vana vedu ndeavo zviratidzo uye nezvishamiso, Ishe, mwana wese anozobuda muukama uyu anotsveneswa zviratidzo uye nezvishamiso muzita raJesu.
Previous nyayaHondo Minamato Iipesana nekurwiswa kwechechi
inoteveraMinyengetero Yakasimba Yekudzivirira Pabasa
Mapisarema 2 Zvinorehwa Ndima neNdima
40 Kununurwa Munamato Kubva Kunonoka Kuroora